ကျွန်တော်နားမလည်သောကျော်လှော်ခြင်းမ&#415 — MYSTERY ZILLION
တကယ်မသိလို့ပါခင်ဗျာ ။ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်သွားလို့မရတဲ့ "web page address"
တစ်ခုကို လိုရာခရီးရောက်ဖို့သွားတဲ့အခါ your freedom,u89,freegate, တို့စသည်
ဖြင့်သုံးပြီးသွားသူကသွား/ proxy pass လုပ်တဲ့ web page လေးတွေသုံးပြီး
သွားကြတယ်လေ/အဒီလို သွားတဲ့အခါ နည်းပညာသဘောအရ ဘယ်လိုပုံဘယ်
လိုနည်းနဲ့လို ရာခရီးရောက်တယ်ဆိုတာလေးကို သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ အရှင်းဆုံးပြောရရင် proxy ကျော်ခြင်းဆိုသည်
ကျနော်တို့ရဲ့ ISP များမှာ Sever နှစ်ခု ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ DNS Server နဲ့ Proxy Server ဆိုပြီးတော့ပေါ့......
DNS Server ဆိုတာကတော့ မဆိုင်လို့မပြောတော့ပါဘူးခင်ဗျာ........ (အမှန်က သိကိုမသိတာ :P)
ဥပမာဗျာ.... ကျနော်တို့ Google ကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Google server ကိုလှမ်းပြီး request လုပ်ရပါတယ်...... Google Server က Europe မှာဆိုရင် Europe အထိ request လှမ်းလုပ်ရတာပေါ့ဗျာ...... အဲဒီအတွက်အချိန်ကြာလာပါတယ်ခင်ဗျာ.....အဲဒီတော့ ISP မှာ Proxy Server ဆိုပြီး လုပ်ထားပါတယ်....... ကျနော်တို့ request လုပ်လိုက်ရင် proxy server ဆီအရင်ဆုံးရောက်ပါတယ်..... အဲဒီမှာ ပြသာနာစတော့တာပဲဗျ......... ဥပမာပေါ့ဗျာ... www.youtube.com ဆိုပြီး Bagan ကို request လုပ်လိုက်ရင် မရတာကိုလူတိုင်းသိမှာပါ........
အဲဒီလိုမျိုးဆိုက်တွေကို ISP တွေက ဘန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ.....
Vtunnel တို့ Utunnel တို့နဲ့ကျော်ရင်တော့ အဲဆိုက်ရဲ့ proxy တစ်ခုတည်းကိုပဲ သုံးတာဖြစ်လို့ ISP က မသိတော့တာပါ.....
ဖတ်ဖူးတဲ့ တစ်နေရာက မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.......
အဲဒီတော့ ရန်သူမမြင်အောင် မြေအောက်က ဥမင်ဖောက်သွားတာပေါ့:p
(အများနားလည်အောင်လို့ လိုတိုရှင်း ရှင်းပေးလိုက်တာနော်)
ဒီပုံလေး ကြည့်ရင်နားလည်နိုင်မလားပဲ ...........
အခြေခံအကျဆုံး ... ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ ..........
yourfreedom ရဲ့ပုံလေးပေါ့ .......:)
အကိုရေ.. ပုံမပါလာဘူးဗျ... လုပ်ပါဦး (
proxy ကျော်တဲ့ ဆိုဒ်လေးတွေကကောဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သွားကြတာလဲ
ဆိုတာလေးလဲသိချင်ပါတယ်။နောက်တခါ ISP က ဘန်းတဲ့အခါမှ IP အတိ
အကျနဲ့ ဘန်းတာလား၊domain address နဲ့ပဲ ဘန်းတာလား၊ဘန်းပုံဘန်းနည်း
This depands on their mind.
Technically, they can ban by all ways.
Contents in webpages such as keywords: porn,xxx,and etc...
High end proxy firewall can detect even tunneling.:68: